Tombony ho an'ny mpanao trano
Ny rano lanin'ny trano fidiovana ataonay dia ambany kokoa, 0,5L / flush fotsiny.
Safidy fitomboan'ny drafitra
Ireo fantsona dia azo apetraka mitsangana ao anaty valindrihana ary na amin'ny rindrina manify aza, satria ny rafi-pitana mitafo dia afaka mampiakatra ny rano maloto avy any amin'ny trano fidiovana. Ny rafitry ny kabine dia tsy mitaky fitongilanana kely hanorenany.
Fampitomboana ny fahadiovana sy ny fivezivezena amin'ny rivotra madio kokoa amin'ny toeram-pidiovana
Tsy mila mametraka fantsona rivotra. Ny trano fidiovana ataonay dia manala tsara ny fofona 30 - 40L sy zavona manodidina ny rano maloto ka ambonimbony kokoa sy milamina kokoa.
Tsy misy asa vita amin'ny tile na asa vita amin'ny beton
Fepetra takiana amin'ny toerana ambany sy vidin'ny fantsona
Mametraka mora foana ary voatazona tsotra.
Tombontsoa ho an'ny mpamorona tranobe
Fanamafisana ny famolavolana.
Tsy misy fepetra takiana amin'ny antontany.
Ny fantsom-panafody dia azo alefa manodidina ny sakana.
Ahafahan'ny mpamorona mahazo teboka LEED amin'ny fananganana trano vaovao.